WIIL SOOMAALIYEED OO KU GUULEYSTAY TARTANKA QURAAN AKHRISKA EE DUBAI
Waxaa caawa ku guuleystay tartankii 4aad ee caalamiga ah ee Quraan akhriska ee lagu qabtay bishan barakeysan ee Ramadaanka magaaladan Dubai, wiil Soomaaliyeed oo la yiraahdo Cabdulcaziiz Cabdullahi Adam. Waxaana tartankaas kula jiray 60 tartame oo laga soo kala sharaxay 60 dal oo qaarna ay muslin yihiin, qaarna ay ku nool yihiin jaalaiyado Islaam ah .
Tartankaan oo socday in muddo ah , waxaa si caalami ah looga daawanayay maxadhadaha Telefishinka Dubai habeen kasta , iyagoo ay garsoorayeen culuma loo soo dooray oo ka kala socday dalalka Syria, Masar, Tunisia, Sudan, Morocco iyo Turkey .Waxaa kaloo lagu martiqaaday culumaa-u-diin ka kala socday dalal badan oo dunida muslinka ah oo goobjoog ahaa .
Tartamayaasha oo dhan waa inay dusha ka qaybaan Quraanka ,iyagoo su'aalo laga weydiiyay meela kala duwan ,si aad ah loo dhegeystay tajwiidkooda.
Xafladii lagu soo gebegebeeyay tartankan oo lagu qabtay caawa (16th December 2000) Xaruunta Rugta Ganacsiga iyo Wershadaha ee Dubai, waxaa ka soo qaybgalay oo ka abaalmariyay tartamayaasha Sheikh Maxamed Bin Raashid Al-Maktoum oo leh dhaxalka xaakimnimada Dubai (crown prince ) isla markaana ah Wasiirka Gaashaandhigga ee Isutagga Imaaraadka Carabta.
Waxaa kaloo isla munaasabadaas lagu sharfay oo yimid shaqsiyadda Islaamka ee sanadkan oo loo gartay inuu noqdo Sheikh Yuusuf Al-qaradaawi oo nin caalin ah oo adduunka muslinka laga yaqaano, waxna ka dhiga Jaamacadda Dooxa ee Dalka Qadar , iyadoo xafladdu ahayd mid si wanaagsan loo agaasimay oo ay ka soo qaybgaleen shuyuuq,madax sare iyo dadweyne aad u tiro badan .
Waxaa xusid mudan in sanadkii ina soo dhaafay, tartankii la qabtay uu wiil Soomaaliyeed ka galay jagada 4aad,isagoo helay 70,000/= oo dirham oo u dhiganta US.$ 19000/= . Laakin Sanadkan tartamihii ka socday dalkeena Soomaaliyeed oo runtii kor u qaaday sumacadda iyo sharafkeenaba wuxuu ku guuleystay lacag dhan 250,000/= oo dirham , una dhiganta 68,000 oo doolarka mareykanka ah . Hambalyo, Hambalyo.